Fitsaboana ambonin'ny tany - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Voalohany indrindra, mila fantarintsika hoe nahoana ny vokatra no mila fitsaboana ambonin'ny tany, inona ny asany ary inona ny olana voavahany.
Voalohany indrindra, ny fomba fitsaboana ambonin'ny tany amin'ny famolavolana artifisialy sosona ambonin'ilay vatan'ny substrate izay tsy mitovy amin'ny toetra mekanika, ara-batana ary simika an'ilay substrate. Ny tanjon'ny fitsaboana amin'ny alalàn'ny tany dia ny hihaona amin'ny fanoherana ny harafesin'ny vokatra, ny fanoherana ny fitafiana, ny haingon-trano na ny fepetra ilaina manokana hafa.
Mpanjifa maro no hanontany antsika hoe maninona no ilaintsika ny fitsaboana amboniny, inona ny asany ary inona no antony hanampiana an'ity dingana ity?
Ouzhan mpiasa ara-teknika:Ny fitsaboana amin'ny alalàn'ny tany dia ny fanesorana ireo karazan-javatra vahiny rehetra (toy ny solika, harafesina, vovoka, sarimihetsika fandokoana taloha, sns.) Mifatotra amin'ny velaran'ilay zavatra, ary manome substrate tsara mety ho an'ny takelaka fonosana hahazoana antoka fa ny sarimihetsika sarona manana fiarovana tsara. Fanatanterahana harafesina, fampisehoana haingon-trano ary asa manokana sasany, ny tampon'ny zavatra dia tsy maintsy alohan'ny alohan'ny fandokoana. Ny asa vitan'ity karazana fitsaboana ity dia antsoina miaraka amin'ny fitsaboana mialoha (sary) alohan'ny fanaovana hosodoko (endrika).
Ny fitsaboana ambony dia manatsara ny faharetana sy ny fanoherana ny abrasion amin'ny vokatra. Amin'ny fototra voalohany, mampitombo ny fotoana fampiasana izy io ary mamonjy fotoana sy vola ary vola be.
Ity fomba ity dia mampiasa ny valin'ny elatra (electrode) hananganana firakotra eo ambonin'ny lafin'ny asa. Ny fomba lehibe indrindra dia:
Ao amin'ny vahaolana electrolyte, ny workpiece dia ny cathode. Ny fizotry ny famolavolana firakotra ambonin'ilay zavatra ataon'ny onja ivelany dia antsoina hoe electroplating. Ny sosona plating dia mety ho vy, firaka, semiconductor na misy sombina mivaingana isan-karazany, toy ny plating varahina sy ny plastika nikela.
Ao amin'ny vahaolana electrolyte, ny workpiece no anode. Ny dingan'ny famolavolana sarimihetsika oksida eo ambonin'ny ety ambanin'ny asan'ny ony ivelany dia antsoina hoe anodisation, toy ny fanodinkodinana firaka aliminioma.
Ny fitsaboana oksidana amin'ny vy dia azo atao amin'ny alàlan'ny fomba simika na elektrokimika. Ny fomba simika dia ny fametrahana ny workpiece amin'ny vahaolana oxidizing, ary miantehitra amin'ny hetsika simika mba hamoronana sarimihetsika oksida eo ambonin'ny sehatry ny sangan'asa, toy ny fanamainam-by.
Ity fomba ity dia tsy misy hetsika amin'izao fotoana izao, ary mampiasa ny fifangaroan'ny akora simika mba hamoronana sarona eo ambonin'ilay sangan'asa. Ny fomba lehibe indrindra dia:
(1) Fitsaboana membrane fiovam-po simika
Ao amin'ny vahaolana electrolyte, ny workpiece metaly dia tsy misy hetsika ivelany ankehitriny, ary ny akora simika ao amin'ilay vahaolana dia mifampiraharaha amin'ilay workpiece mba hamoronana rakotra eo amboniny, izay antsoina hoe fitsaboana sarimihetsika fiovam-po simika. Toy ny bluing, phosphating, passivation, ary chromium sira amin'ny faran'ny metaly.
(2) Fametahana herinaratra
Ao amin'ny vahaolana electrolyte, ny tampon'ny workpiece dia voatsabo amin'ny catalytically raha tsy misy ny vokatry ny ankehitriny. Ao amin'ny vahaolana, noho ny fihenan'ny akora simika, ny fizotry ny fametrahana zavatra sasany eo ambonin'ny sehatry ny workpiece mba hamoronana coating dia antsoina hoe plating electroless, toy ny nickel tsy misy herinaratra, plating varahina tsy misy herinaratra, sns.
Ity fomba ity dia ny mandronika na manaparitaka thermally ilay fitaovana ao anaty toe-piainana maripana avo mba hamoronana fisaronana amin'ny tampon'ny workpiece. Ny fomba lehibe indrindra dia:
(1) Famonoana rano mafana
Ny fizotry ny fametrahana ny sangan'asa vy amin'ny metaly metaly hamolavola firakotra azy dia antsoina hoe plastika mandroboka mafana, toy ny galvanizing mafana sy ny alim-pito mafana.
(2) Famafazana hafanana
Ny fizotry ny fikajiana ny metaly metaly ary ny famafazana azy eo ambonin'ilay sangan'asa mba hamoronana firakotra dia antsoina hoe famafazana hafanana, toy ny zinc famafazana hafanana ary alim-bavaky ny rivotra mafana.
(3) Fametahana hafanana
Ny fizotry ny fanafanana sy ny fanindriana ny foil metaly handrakofana ny velaran'ilay sangan'asa mba hamoronana sosona firakotra dia antsoina hoe stamping mafana, toy ny foza vita amin'ny alim-pito vita amin'ny aluminium.
(4) Fitsaboana hafanana simika
Ny fizotry ny fifandraisan'ny workpiece amin'ny akora simika sy ny hafanana, ary ny singa iray izay miditra amin'ny sehatry ny sanganasa amin'ny hafanana ambony dia antsoina hoe fitsaboana hafanana simika, toy ny nitriding sy carburizing.
(5) Surf Surf
Amin'ny alàlan'ny welding, ny dingan'ny fametrahana ny metaly napetraka eo ambonin'ny sehatry ny workpiece mba hamoronana sosona welding dia antsoina hoe surfacing, toy ny welding welding miaraka amin'ny alika matevina.
FOMBA FIASA VACUUM
Ity fomba ity dia dingana iray anaovana etona na ampitaina ny akora ary apetraka eo ambonin'ilay sangan'asa amin'ny alàlan'ny fantsom-batana avo mba hamoronana fonosana. Ny fomba lehibe indrindra dia.
(1) Fametrahana etona ara-batana (PVD)
Eo ambanin'ny fantsom-pako, ny fizotran'ny metaly etona ho lasa ataoma na molekiola, na manefatra azy ireo ho lasa ion, dia apetraka mivantana eo ambonin'ny sehatry ny sangan'asa mba hamoronana loko, izay antsoina hoe fametrahana setroka etona. Ny taratra sombin-javatra napetraka dia avy amin'ny antony tsy simika, toy ny fitrandrahana Sputtering plating, ion plating, sns.
(2) Fametahana ion
Ny dingan'ny fametrahana ionona samy hafa ao ambonin'ny sangan'asa amin'ny alàlan'ny herinaratra avo lenta hanovana ny amboniny dia antsoina hoe ion implantation, toy ny boron injection.
(3) Fametrahana etona simika (CVD)
Eo ambanin'ny tsindry ambany (fanerena mahazatra indraindray), ny fizotran'ny entona entona mamorona sosona fametrahana mafy eo ambonin'ny sehatry ny sangan'asa noho ny fiatraikany simika dia antsoina hoe fametrahana setroka etona, toy ny fametrahana etona ny silikôida oksida sy ny silikona nitrida.
FOMBA FOMBA FIASA
Fomba mekanika, simika, elektrokimika ary ara-batana indrindra. Ny fomba lehibe indrindra dia:
Ny fomba famafazana na fikosehana tsy miasa dia ny fampiharana ny loko (biolojika na tsy biolojika) ambonin'ilay sangan'asa mba hamoronana fonosana, antsoina hoe hosodoko, hosodoko, sns.
Ny dingan'ny famolavolana sosona eo ambonin'ny sehatry ny workpiece misy fiantraikany mekanika dia antsoina hoe plating misy fiantraikany, toy ny galvanizing impact.
Fitsaboana amin'ny laser
Ny fizotran'ny fanodinana ny atin'ny sangan'asa amin'ny laser hanovana ny firafiny dia antsoina hoe fitsaboana amin'ny alàlan'ny laser, toy ny famonoana laser sy fanavaozana ny laser.
Ny teknolojia fanomanana sarimihetsika mafy indrindra eo ambonin'ny sehatry ny sangan'asa amin'ny alàlan'ny fomba ara-batana na simika dia antsoina hoe teknolojia sarimihetsika tena mafy. Toy ny sarimihetsika diamondra, sarimihetsika borika borôka boron sns.
FIFAMPITAHAN-KEVITRA elektrika sy fandefasana herinaratra
Amin'ny maha electrode azy dia ampidirina ao anaty loko azo esorina amin'ny rano azo alefa na alain-drano ilay fitaovana, ary mamorona faritra misy ilay elektroda hafa ao anaty loko. Eo ambanin'ny hetsiky ny sahan'aratra, ny vahaolana famonoana dia nesorina tamina ion resin voampanga, ny cations dia nifindra nankany amin'ny cathode, ary ny anion dia nifindra nankany amin'ny anode. Ireo iôna resina voadidy, miaraka amin'ireo sombintsombin'ny pigmentor dia mipetaka amin'ny electrophoresed ambonin'ilay sangan'asa mba hamoronana fonosana. Ity dingana ity dia antsoina hoe electrophoresis.
2. Famafazana herinaratra
Eo ambanin'ny asan'ny sahan'aratra herinaratra mahery vaika DC, ny sombin-doko vita amin'ny atiny tsy voafehy dia entina manidina eo amin'ilay sangan'asa voavidy tsara mba hahazoana sarimihetsika hosodoko, antsoina hoe famafazana static.